Maxay Tahay Waxyaabaha Soo Saaray Isticmaaluhu Ugu Sarreeyaan Da'da Warbaahinta Bulshada | Martech Zone
Waa wax aad u la yaab leh in la arko sida teknolojiyaddu ugu soo ifbaxday muddadaas yar. Waqti dheer ayaa dhaafay maalmaha Napster, MySpace, iyo AOL dial-up oo xukuma suuqa internetka.
Maanta, barnaamijyada warbaahinta bulshada ayaa ugu sarreeya adduunka dijital ah. Laga soo bilaabo Facebook ilaa Instagram illaa Pinterest, dhexdhexaadiyayaashan bulsheed waxay noqdeen qaybo muhiim u ah nolol maalmeedkeena. Ha ka fogaan inta jeer ee aan ku qaadanayno baraha bulshada maalin kasta. Sida laga soo xigtay Stastista, qofka celceliska kharashka ayaa bixiya 118 daqiiqadood maalintii daalacashada shabakadaha warbaahinta bulshada. Waxay noqotay sida aan ula xiriirno, u muujino shucuurta, iyo xitaa ka iibino alaabada macaamiisha adduunka.
Aynu si dhow u eegno sida ganacsiyada ay uga faa'iideysanayaan warbaahinta bulshada inay u kobciyaan sumcaddooda, iyagoo u rogaya daalacashada dadban macaamiil daacad ah.
eCommerce, Bulshada, iyo UGC: Weligoodba Way Kuxiran Yihiin
Adduunyada eCommerce waxay si dhakhso leh u noqotay mid ka mid ah goobaha ugu tartamaya ganacsiyada inay ku guuleystaan. Iyadoo shirkadaha internetka iyo kuwa khadka tooska ahba ay raadinayaan inay lacag ka helaan oo ay ka faa'iideystaan ​​awoodda warbaahinta bulshada, kala soocista astaantaada tartanka ayaa noqotay mid aad u adag sidii hore.
Marka sidee u guuleystaan ​​dukaamada eCommerce? Jawaabtu waa nuxur ay isticmaaleyaashu soo saareen.
Maqaalkan, waxaan si qoto dheer uga hadli doonnaa sababta ay ka kooban tahay adeegsadaha soo saaray ay tahay aaladda ugu muhiimsan ee aad uga faa'iideysan karto da'da warbaahinta bulshada. Waxaan taaban doonnaa mid kasta oo ka mid ah barnaamijyada warbaahinta bulshada, oo daboolaya talooyinka iyo hababka ugu fiican ee looga faa'iideysan karo UGC isla markaana looga caawiyo meheraddaadu inay ka taliso bulshada oo dhan.
Waxay leeyihiin waxa ku jira waa boqor. Hagaag, waxaan aaminsanahay in waxyaabaha isticmaale-soo-saaray ay hadda yihiin boqorka. Kaalay oo ogow sababta:
U rogo boggaaga ganacsiga ee Instagram dhul yaab leh oo la iibsan karo
Waxaan ku noolnahay adduun halka ay feejignaantayadu kooban tahay. Baraha bulshada gaar ahaan, adeegsadayaashu waxay aad u xiiseeyaan iskaanka iyo rogrogmada marka loo eego akhrinta qaybo fara badan oo qoraalka ah. Tani waa sababta Instagram ay u noqotay awood sidan oo kale ah oo lagu xisaabtami karo, iyadoo lagu xardhay qayb aad u tiro badan oo adeegsadayaal daacad u ah barxadooda sawir-ku-saleysan.
Xogtu waxay taageertaa guushooda. Xaqiiqdii, dhammaan dariiqyada bulshada, taraafikada dukaamada eCommerce ee ka socda Instagram waxay sii joogaan goobta ugu dheer ugu badnaan 192.4 ilbiriqsi. Jaantuska hoose wuxuu muujinayaa sida Instagram ay ugu hartay tartanka:
Marka sidee uga faa'iideysan kartaa awoodda Instagram oo uga faa'iideysan kartaa barxadda si aad u bilowdo iibinta? Mawduuca isticmaale-abuuray, dabcan.
Dadku si isku mid ah ayey aaminaan sawirada iyo waxyaabaha ka imanaya macaamiisha dhabta ah ee dhabta ah in ka badan tafaariiqleyda laftooda. Waxay u oggolaaneysaa macaamiisha inay arkaan in badeecooyinka aad iibiso ay ku raaxeystaan ​​dukaamaysatada adduunka oo dhan.
Isku day inaad ku darto sawirrada isticmaale-curiyaha ah ee 'Instagram' oo leh muuqaal cusub oo xiiso leh oo dhowaan ay soo saartay Yotpo oo la yiraahdo Instagram la iibsan karo. Instagram la iibsan karo waxay u oggolaaneysaa noocyada 'eCommerce' inay u rogaan goobahooda 'Instagram' wax la iibsan karo. Nidaamku runtii waa mid fudud.
Goob isku mid ah oo kuxiran noloshaada 'Instagram bio', qaabka loo adeegsan karo ee 'Instagram' ayaa ah muraayad muuqaal ah oo ah boggaaga asalka ah ee 'Instagram'. Tani waxay hubineysaa in macaamiisha ay helayaan isla waayo-aragnimo sahlan oo rogrogasho ah oo ay filayaan, laakiin marka lagu daro sameynta waxyaabaha ay u arkaan in la iibsan karo. Sameynta waxyaabahaas ay u arkaan isticmaale-soo-saare waa qalab aad u awood badan.
Tusaale weyn oo ah tafaariiqle eCommerce oo si buuxda uga faa'iideysanaya isku darka UGC iyo Shoppable Instagram waa Hamps. Tafaariiq caan ah oo loo yaqaan 'Landsurfing', waxay garwaaqsadeen awoodda u rogista sawirrada adeegsadaha laga soo saaro ee ku jira barta 'Instagram' xiriiriyeyaal la iibsan karo oo guji badhanka. Sida aad hoos ku arki karto, natiijadu waa dukaan nadiif ah, oo macaamiil dhiirrigelin leh oo u muuqda in isticmaale uusan waligiis ka bixin Instagram:
Raac hogaaminta Hamboards, iskuna laabo Shoppable Instagram iyo waxyaabaha la soo saaray ee adeegsadaha ah ee ugu dambeeya guusha eCommerce ee Instagram.
Adeegso dib u eegista UGC si aad uga dhigto xayeysiimahaaga Facebook inay ka dhex muuqdaan dadka badan
Dhamaanteen waan ognahay sheekada Facebook ilaa xiddignimada bulshada. Laga soo bilaabo fikrad ka jirta qolka hurdada ee Harvard illaa shirkad balaayiin dollar ah, Facebook ayaa ah meesha ugu sarreysa ee ku guuleysiga warbaahinta bulshada qarniga 21aad. Barmaamijku wuxuu sii wadaa inuu isbeddelo, si joogto ah u beddelo sida aan ula macaamilno una wada xiriirno midba midka kale.
Ganacsi kasta, waxaa laga yaabaa inaysan jirin meel ka fiican oo lagu xayeysiiyo badeecadaada marka loo eego Facebook. Kaliya maahan inay ka dhigaan nidaamka sida ugu fudud ee suurtogalka ah, laakiin gaadhista suurtagalka ah ee xayeysiiskaaga kuwa wax iibsanaya waxay noqon kartaa mid aan dhammaad lahayn.
Habka ugu wanaagsan ee loo helo in xayeysiiskaagu soo jiito dadka isticmaala Facebook ayaa ka faa'iideysanaya waxyaabaha ay soo saaraan isticmaaleyaasha macaamiisha hore. Adoo si fudud u muujinaya dib u eegis wanaagsan oo ka socota macaamiil faraxsan oo ku jirta xayeysiiskaaga Facebook, ROI ee sheygaas kor buu u kacaa
Qaado MYJS, dukaanka dahabka ee internetka, tusaale ahaan. Shirkad dahab ah oo guuleysatay in ka badan 3 fac, waxay si dhakhso leh u ogaadeen awoodda warbaahinta bulshada iyo baahida loo qabo helitaanka joogitaanka khadka tooska ah.
Iyadoo Facebook uu yahay shirkad weyn oo ka tirsan warbaahinta bulshada, MYJS waxay fahamsan tahay in xayeysiinta Facebook ay tahay daruuri. Markii ay bilaabeen adeegsiga Yotpo iyo UGC Xayeysiiska Facebook adoo adeegsanaya dib u eegista macaamiishii hore, cabirkoodu si weyn ayuu u fiicnaaday. UGC waxay keentay qiimo dhimis-iibsi kasto oo ah 80%, isla mar ahaantaana abuureysa 200% koror ah heerka guji-sidoo sidoo kale.
Goobta xayeysiinta ee Facebook ayaa ku qasan boqolaal kun oo ganacsi. Isticmaalka UGC ee xayeysiintaada Facebook dhexdeeda waxaa laga yaabaa inay kaliya jawaab u tahay in taadu ay taagnaato.
Pinterest: Hubkaaga sirta ah ee warbaahinta bulshada ee doonaya waxyaalaha ay soo saaraan isticmaaleyaashu
Badanaa waa la iska indho tiraa marka la sheegayo aaladaha waaweyn ee warbaahinta bulshada, Pinterest wuxuu u duulaa radar-ka noocyo badan oo wax ku iibiya internetka. Fikraddan khaldan ee ah in Pinterest aysan muhiim u ahayn sida kuwa kale ay kormeer ugu yihiin shirkad kasta oo ku dhacda qaabkan fikirka ah. Pinterest waa mid ka mid ah barnaamijyada warbaahinta bulshada ee sida ugu dhakhsaha badan u koraya oo si aad ah ugu hawlan, oo doonaya inay iibsadaan saldhigga isticmaalaha.
UGC waxay ka ciyaartaa mid ka geddisan, haddana si isku mid ah muhiimadda doorka Pinterest. Iyada oo ganacsiyada adeegsanaya "looxyada" iyo "biinanka", Pinterest waa barta ugu fiican ee u oggolaanaysa macaamiisha inay muujiyaan mahadnaqa iyaga oo ku boorinaya waxyaabaha ay soo saaraan isticmaaleyaashu guddiyadan
Mid ka mid ah noocyada ugu caansan eCommerce, Warby Parker, wuxuu UGC ku fuliyaa Pinterest si qumman. Waxay abuureen guddi cinwaankiisu yahay Asxaabteena Kuxirran, Halkaas oo ay ku soo bandhigaan saamileyaal caan ah oo khadka tooska ah ku xidha muraayadaha muraayadaha meelo kala duwan. Iyadoo ay ka badan yihiin 35 kun oo raacsan guddigan oo keliya, Warby Parker ayaa xaqiiqsaday oo ka faa'iideystay fursadda ah adeegsiga waxyaabaha ay soo saaraan isticmaaleyaasha oo qayb muhiim ah ka ah Istaraatiijiyada suuq geynta Pinterest.
Waxaan ku noolnahay adduun ay ku badan yihiin baraha bulshada
Macluumaadkeena waxaan ka helnaa quudinta wararka halkii wargeysyada laga heli lahaa. Waxaan raadineynaa macluumaad ku saabsan matoorada raadinta halkii aan ka raadin lahayn maktabadaha; wax walba hadda waxaa laga heli karaa talooyinka fartayada dhijitaalka ah. Haddii ay tani tahay wax wanaagsan ama xun bulshada waxay ku jirtaa doodaha dadweynaha iyo ra'yiga. Waxa aan dood ka ahayn, si kastaba ha noqotee, waa muhiimadda UGC ee ku dhex jirta warbaahinta bulshada. Waxyaabaha ay soo saaraan isticmaaleyaashu waxay abuuraan dareen ah kalsooni iyo run ahaaneed oo u dhexeeya shirkadda iyo macaamilka, taas oo baraha bulshada ay tahay dhacdo naadir ah oo lagu gaaro. Hadday ahaan lahayd Facebook, Instagram, ama Pinterest, waxyaabaha ay soo saaraan isticmaaleyaasha iyo warbaahinta bulshada ayaa isku xirnaan doona sannado iyo tobanaan sano oo soo socota.
Tags: Content SuuqInstagramPinterestinstagram la iibsan karouGCwaxyaabaha ka kooban isticmaaleYotpo
Bloomka 'Corey Bloom'
Corey Bloom waa Maamulaha Suuqgeynta Macluumaadka at Yotpo. Marka uusan ka hadleynin waxyaabaha isticmaale-soo saaray, waxaad ka heli kartaa isaga oo raadinaya meesha xigta ee weyn ee uu wax ku cuno.